MACLUUMAADKA SAWIRADA IYO SAWIRADA KING SHEPHERD DOG - EEYAHA
Macluumaadka Sawirada iyo Sawirada King Shepherd Dog
Twin Willows Mia of Lpckingshepherd, aka Mia the King Shepherd oo 2 jir ah— 'Mia waa eeyga ugu fiican ee aan abid leeyahay. Iyadu waa mid aad u caqli badan oo daacad ah. Waxay kaliya jeceshahay inay la joogto qoyska waxayna jeceshahay inay raacdo gaariga. Allaa mahad leh waxaan daawaday Cesar Millan. Wax badan ayey iga caawisay sidii iyada loogu tababari jiray cunug yar. Bulsho dhexgal, xiriir bulsho, jimicsi, edbin iyo amaan. '
Dhismaha Boqorka Adhijirku waxyar buu dheeryahay, waa xoog badan yahay, waana murqo, qaabdhismeedkuna waa adag yahay. Madaxa ayaa si wanaagsan ugu habboon jirka oo dhex dhexaad u ah indhaha dhexdooda. Foodda hore, muuqaal ahaan laga arko xagga hore iyo muuqaalka, waxyar uunbaa la wareejiyaa, iyadoo la leeyahay ama aan la haynin meel dhexe oo si dhexdhexaad ah loo qeexay. Dhabannadu aad uma buuxsamaan, si dhexdhexaad ah ayaa loo qalooca, marka laga eego xagga sare waa inay u badan tahay qaab 'V,' oo si fiican indhaha looga buuxiyaa. Dhegaha qaro weyn, ee adag waa kuwo dhexdhexaad ah, dhex dhexaad ah oo ballaadhan oo salka ku haya, korna loo taagay isla markaana fiiqan waxaa loo qaadaa si toos ah iyo waxoogaa xagga hore ah (Ey yaryar ilaa da'da 4-6 bilood, marmarka qaarkoodna ka weyn, dhegaha ma wada qaataan gebi ahaanba kacsan). Indhuhu waa dhex dhexaad iyo u egyihiin yicib, qaab xoogaa loo dhigaa oo aan loo adkaysan karin, sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee la mid ah jaakadda ku hareeraysan ee midabbada buniga ah, laga bilaabo iftiinka ilaa mugdigana waa la aqbali karaa. Laabta ayaa qoto dheer oo ballaadhan. Si adag u baalal leh, dabadu waxay gaaraysaa ugu yaraan hocks. Dabada ayaa hoos loo dhigaa waxyarna waa la qalooca marka lagu farxo ama la dhaqdhaqaaqo, eyga ayaa kor u qaada dabada, taas oo noqota mid qaloocan, iyada oo aan si kastaba ha ahaatee, looga sii gudbi karin qarka dheer. Intaas waxaa sii dheer, waa inaysan ku jiifsan ama ku duubmin dhabarka. Dabo ku xidhnayd lama aqbali karo. Lugaha ayaa wareegsan oo gaaban oo si fiican u xiran, qaansada. Suufiyadu aad ayey u adag yihiin. Ciddiyaha ayaa gaaban oo xoog leh, guud ahaan midab madow. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta (Dewclaws). King Shepherd wuxuu ku yimaadaa noocyo badan oo midabbo la aqbali karo ah. Kuwani waa sida soo socota: sable (midab bunni ah oo leh calaamado bunni ama madow ah, ama lacag qalin ah oo leh calaamado madow) koorsada madow oo leh tan, dahab, kareem, tan ama calaamado lacag ah. Midabbo xoog leh, midabbo hodan ah iyo midabbo ayaa si aad ah loo door bidaa. Dhibco yaryar oo yar yar oo xabadka ah ayaa la aqbali karaa. Midabbada midabbada leh oo midabkoodu yahay midab khafiif ah, waa cilado culus. Koodhka hoose waa midab aan beddelmi karin, marka laga reebo eeyaha madow. Eeyaha cad, buluuga ah ama midabka beerka leh ama eey leh san aan madow ahayn laguma aqbalayo giraanta bandhiga. Eydu waxay beddelaan midabka dhalashadooda illaa ay ka helayaan jaakaddooda ugu dambeysa. Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah: timo-jilicsan, oo toosan oo timo-dheer leh, taas oo ah mid fudud oo hawo leh
King Shepherd waa isku kalsoon yahay oo leh nidaam isku dheelitiran oo neerfeed waana inuusan xishoon. Aad u caqli badan oo fudud in la tababaro. Aaminaad iyo diyaar u ah inay ka farxiso milkiilaheeda, noocani wuxuu sameeyaa eey shaqeeya oo wanaagsan iyo adhi-jir. Daawasho geesinimo leh iyo ilaaliyaha eyga muujinta geesinimo iyo adkeyn doorkiisa ilaaliyaha, waxay ka dhigeysaa wehel aad u fiican. Adhijirka Boqorka waxaa ka buuxa xoog iyo xoog. Saaxiibtinimada shisheeyaha, carruurta iyo xayawaannada kale. Iscelin, adeecid leh socod fudud iyo istaandarro fara badan. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexaa xeerarna waa la dejiyaa. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka eygaaga waxay noqon kartaa guul dhameystiran.
Dhererka: 25 - 29 inji (64 - 74 cm)
Miisaanka: 90 - 150 rodol (41 - 69 kg)
King Shepherd laguma taliyo nolosha guriga. Waxay kufiicantahay ugu yaraan deyr weyn.
i tus sawirrada boorsooyin
King Shepherd wuxuu jecel yahay waxqabad adag, waxaana doorbidayaa inuu ku biiro tababar nooc nooc ah, waayo eeygan ayaa ah mid caqli badan isla markaana jecel tartan adag. Waxay u baahan tahay in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer , orod ama ku garabsoco markaad baaskiil wado. Haddii jimicsi yar la sameeyo, noocani wuxuu noqon karaa mid aan xasilloonayn oo wax duminaya. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
Koodhku waa mid heer sare u adkaysta cimilada. King Shepherd waa in si joogto ah loo cadaydo. Maydho oo keliya markii loo baahdo.
Beerleyda eyda Mareykanka ee Shelley Watts-Cross iyo David Turkheimer ayaa soo saaray isirkan ballaaran oo ka kala yimid Dogs Shepherd Dogs, Alaskan Malamutes iyo Great Pyrenees. Naadi rasmi ah ayaa la aasaasay 1995.
AKSC = Naadiga King Shepherd Club
ERBDC = Naadiga Eyga Eeyaha Ee Caanka Ah
SKC = Naadiyada Keenaatka Waddamada
Twin Willows Mia ee Lpckingshepherd, aka Mia King Shepherd markuu jiray 2 sano
Lil ’Red the King Shepherd, sawirka waxaa iska leh Amy's Acres King Shepherds
Boqorka Adhijirka Eyga bidix waa haweeney 20 bilood jir ah oo lagu magacaabo Windy, culeyskeeduna yahay 90 rodol iyo 29 'oo dhererkeeda garbaha. Dhanka midig waxaa jooga nin 28-bilood jir ah oo lagu magacaabo Berrin, culeyskiisuna yahay 115 rodol iyo 31 'dhererkiisu yahay meesha ugu sarreysa garbaha.' Lahaanshaha sawirka Amy's Acres King Shepherds
'Sawirkan waxaa laga qaaday cabirka cabirka cabirka hortiisa. Ardaygu waa maalmo yar oo xishood ah oo ah toddobaadyo 12 ah. Budada Caanaha Bisquet ee Amy Acres waa 34 lbs. dhagihiisuna waxay korka ka saaraan khaanadda labaad ee golaha wasiiradda, si ay tusaale uga bixiso sida ay u weyn yihiin Adhijirradani, xitaa sida eyyo yaryar. Caankani wuxuu ka yimid qashin qubka Berrin / Lady. ' Lahaanshaha sawirka Amy's Acres King Shepherds
Polar the King Shepherd, sawirka waxaa iska leh Amy's Acres King Shepherds
Boqortooyada Grand Ch. Chateau De Chief’s Bustah Bruin, waxaa iska leh oo xanaaneeya Shelley Watts-Cross iyo George Cross, Chateau De Chief Kennels
xayawaanka adhijirka ah ee loo yaqaan 'pyrenees great anatolian puppy puppy'
Maja, eeyaha yar ee 'King Shepherd' oo jira 5 toddobaad
Niko ee Boqorka Shepherd eey yar oo jira 3 bilood
Niko ee Boqorka Shepherd eey yar oo jira 4 bilood
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ah Boqorka Adhijirka
9 bilood jir weyn
midab madow iyo cadaan leh indho buluug ah
eey dhimaya qalliinka kadib
SUNTZU shih isku darka pomeranian Daadinta
Eyga feeryahan oo dhutinaya lugta dambe
retriever dahabi ah pyrenees weyn oo isku dhafan eeyo